एनआरएनए निर्वाचन : मुख्यसचिव र सेनाप्रमुखलाई विवादमा तान्ने प्रयास « Janata Times
२२ मंसिर २०७८, बुधबार ००:००
एनआरएनए निर्वाचन : मुख्यसचिव र सेनाप्रमुखलाई विवादमा तान्ने प्रयास
लन्डन, मंसिर २२ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी र सेनाप्रमुख प्रभुराम शर्मालाई तान्ने प्रयास भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघको १०औं महाधिवेशनका अध्यक्ष प्रत्यासी कुल आचार्यले केही दिनअघि मुख्यसचिव बैरागी र सेनाप्रमुख शर्मालाई काठमाडौंको होटेल र्‍याडिसनमा रात्रीभोज दिएको भन्दै अर्को पक्षले संघको निर्वाचन विवादमा शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।
रात्रीभोजमा सहभागी गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेका पूर्वउपाध्यक्ष थर्क सेनका अनुसार सो भोजमा बेलायतका लागि पूर्वराजदूत तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीसमेतको उपस्थिति थियो । सेनले गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचनको यात्रामा काठमाडौंको र्‍याडिसन होटलमा आयोजित रात्रीभोजमा सरकारी उच्चअधिकारीसहित सुझाव लिएको आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पुष्टि गर्नुभएको छ ।
गत आइतवार पाटन उच्च अदालतले एनआरएनए निर्वाचन रोक्नु भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरिदिएपछि सोबिरुद्ध मन्त्रालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा अपिल गराउने उद्देश्यले आचार्यले मुख्य सचिवसहितको डिनरको आयोजना गरेको बताइएको छ । मुख्यसचिव बैरागी र आचार्य दुवैजना पर्वत जिल्लाबासी हुनुहुन्छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको ठाडो हस्तक्षेपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत महाधिवेशन तथा निर्वाचन रोकिएको संघको संस्थापन पक्षले आरोप लगाएको छ । सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवारको रूपमा चर्चामा रहेका आचार्यले सरकार र शक्तिकेन्द्रको प्रयोग गरेर संघको निर्वाचन रोक्ने प्रयास गर्दै आएको अर्को पक्षको आरोप छ । संघको निर्वाचनमा डिसेम्बर २६ र २७ तारिख अनलाइनमार्फत हुने गरी निर्वाचन समितिले तालिका प्रकाशन गरेको छ । संघको नयाँ नेतृत्वका लागि संघका वर्तमान उपाध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी, रविना थापा र कुल आचार्य दावेदार हुनुहुन्छ ।
माधव नेपालको भ्रम टुट्यो भन्दै एमालेमै फर्किइन उपमेयर
काठमाडौं, माघ ९ । माधव कुमार नेपालको भ्रममा परेर नेकपा एकीकृत समाजवादीतिर लाग्नुभएकी सर्लाही हरिपुर
मुलुकमा ब्यापार घाटा चुलिँदै : छ महिनामा १० खर्बको आयात हुँदा एक खर्ब १८ अर्बको मात्रै निर्यात
काठमाडौं, माघ ९ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा नौ खर्ब ९९ अर्ब ३४
काठमाडौं, ९ माघ । नेपालमा संक्रमितमध्ये ८८ प्रतिशतलाई ओमिक्रोन भेरियन्ट रहेको पुष्टि भएको छ ।
देउवा सरकार आएपछि मुलुकको आर्थिक परिसूचक सवै नकारात्मक, यी हुन १५ प्रमाण
काठमाडौं, माघ ९ । पाँच दलीय गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि मुलुकका आर्थिक परिसूचकहरु
मधेस प्रदेशले ‘चुच्चे नक्सा’ हालेर सच्चायो राजपत्र
काठमाडौं, माघ ९ । तत्कालीन प्रदेश २ को नाम परिवर्तन भई मधेस भएको जानकारी दिन
किन चुनावसंग तर्संदैछन् माधव-प्रचण्ड ?
एमाले चोइट्याएर प्रचण्डकै पिछलग्गु हुन पुगेका माधव नेपालको सङ्‌कट प्रचण्डको भन्दा चर्को छ । एमाले
एमाले अध्यक्ष ओलीको १५ बुँदे बक्तब्य : देउवा सरकार सवै क्षेत्रमा पूर्णत असफल (पूर्णपाठ)
काठमाडौं, माघ ९ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान